Ciidamada amaanka oo saaka baaraya gaadiidka maraya jidka Maka Almukarrama – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada amaanka oo saaka baaraya gaadiidka maraya jidka Maka Almukarrama
10th September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa saaka baaritaan ku haya gaadiidka maraya wadada Maka Almukarrama, xilli dhawaan wasaaradda Amaanka Soomaaliya ka digtay in Alshabaab dalka geystaan weeraro ay ugu aargudayaan dilkii hogaamiyahooda oo Mareykanku ku dilay gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamada oo ku sugan goobo ka mid ah wadada muhiimka ah ee Maka Almukarrama ayaa baaraya dhamaan gaadiidka kala duwan. Xitaa waxaa la baarayaa muutooyinka waayahan kusoo badanayey magaalada ee Taksi ahaanta loo adeegsado.
Sidoo kale, ciidamada ayaa baaraya gaadiidka xamuulka ah ee qaada carrada iyo dhagaxa loo adeegsado dhisamaha, iyadoo ciidamadu dusha u fuulayaan oo hubinayaan waxa uu sido.
Ciidamada ayaa si weyn u eegaya wajiyada dadka la socda gaadiidka BL-ka, waxaana baaritaanadaas ka socdaan Isgoyada Dabka iyo Shaqaalaha.
8-dii bishaan ayaa Alshabaab qarax ay la beegsadeen kolonyo ay wateen ciidamada AMISOM waxaa ku dhintay ilaa 20 qof oo u badan shacab la socday laba gaari oo BL ah.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobollada kala duwan ayaa heegan ku jira, waxaana shalay magaalada Jowhar ciidamada amaanku baaritaan ku sameeyeen inta badan gaadiidka lasoo dhigo goobaha la isugu yimaado.
Qaxootiga Soomaaliya ee Kenya oo u dhaxeeya dhagax iyo degaan adag
Kenya oo heegan ka gashay Alshabaab